Manaova doka eto | Vaovao IPhone
Manaova doka eto
Raha mifantoka amin'ny fivarotana ny iPhone, iPod Touch, kojakoja ary / na fampiharana ho an'ny vokatra roa na karazana fitaovana finday na serivisy mifandraika ny orinasanao. Vaovao IPhone fotoana tsara hanatonana ny mpanjifanao izany.
Actualidad iPhone no tranokala lehibe natokana 100% ho an'ny iPhone Apple amin'ny Espaniôla. Mankanesa any amin'ireo mpanjifa mety mitady vaovao momba ny iPhone.
Manana isan'ny mihoatra ny Hevitra pejy 2,5 tapitrisa an'ny mpampiasa liana amin'ny iPhone sy ny kojakoja rehetra ao aminy. Amin'ny alàlan'ny fanaovana dokambarotra ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny tranokalanay, dia hahatratra mpanjifa mety an-tapitrisany haingana sy mora ianao.
Raha te hifandray aminay momba ny olana amin'ny dokambarotra dia ampiasao ity form manaraka ity: